GnuPG: maitiro ekunyora nekunyudza mafaera pane yako distro neichi chishandiso | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Sisitimu Yekutonga, GNU/Linux, Zvirongwa
Munguva dzinomhanya nenjodzi dzakawandisa mune zvese software uye Hardware uko matambudziko aya anogona kushandiswa kuve nekuwana kure kure kune mimwe michina uye kunyangwe kuita kure kana kwenzvimbo mukana wekuwedzera pamushini wekubiwa, zvakakosha kuita zvese zvinodiwa nzira dzekuchengetedza uye maprotocol izvo zvatinoziva kana kuti zvatinazvo zvekuchengetedza data redu rakachengeteka. Uye kana iwe ukashanda nedhata dhata kana uine kambani ine vatengi vanokupa ruzivo, nechikonzero chakawanda.
Isu takatodzokorora neanoshanda uye epashure kuti iwe unofanirwa kuchengetedza iyo system kuvandudzwa, kudzivirira kuva online pazvinogoneka, iyo inonyanya kunetsa data inofanirwa kuchengetwa mune inobviswa yemuno yekuchengetedza mudziyo, kuitira kudzivirira kuti iro ruzivo rwunogara ruripo pamushini uyo inogona kushupika, uye zvechokwadi gara uchiita mabhakuki enguva dzose. Kunze kwaizvozvo, Ndinokurudzira kuti unyore zviri mukati memafaira ako kana gadzira kunyorwa kwakazara kwezvikamu zvako kuitira kuti iyo data isasvikike pasina password kuti isimbise, kunyangwe iwe uchikwanisa kuwana muchina ...
1 Chii chinonzi encryption?
2.1 Mhemberero: PGP
2.2 Chii chinonzi GPG?
3 GnuPG dzidziso:
3.1 Encrypt mafaera neGPG:
3.2 Nyora mafaira neGPG:
Chii chinonzi encryption?
Pane akawanda mawebhusaiti uye dzidziso iwe unowana iro izwi encrypt uye decrypt kureva kunyorera uye kuseta kwedhata remakomputa. Asi, kana iwe usina kuziva, ini ndichazvitaura kwauri, aya mazwi ane kumwe kupokana, kunyangwe zvichiratidzika kuti zvinogamuchirwa uye zvakapararira nekuda kwekuwanda kwavo, kunyangwe pakati pevanyanzvi mubato iri. Iko kuvhiringidzika kunobva pakrisptography kana sainzi yekuvanda, uye zvakanyanya kubva kuizwi reChirungu "encrypt" iro rinobva kune neologism yakatorwa zvakananga kubva muchiGiriki krypto, uye iyo yakashandurwa yakananga muchiSpanish se encrypt.
Kune rimwe divi, muchiSpanish zvinoita sekunge urikuti "isa mu crypt" chimwe chinhu "tora chinhu kunze kwekrispt". Nekudaro, kana isu tikatarisa chiGreek kunobva izvi zvese, inova "krypto" zvinoreva kuvanda. Nekudaro iwe unogona kushandisa izwi iro raunonyanya kufarira ... muchokwadi RAE yakaguma ichizvigamuchira se rinoreva zvakafanana kuti encrypt. Ini pachangu, ini handidi kubhadhara zvakanyanya kugadziriswa uku uye ndinosarudza kushandisa zvese zvakafanana uye nekusiya "sainzi kana hunyanzvi hwekuhwanda" kune steganography sezwi rakazara.
Mhedziso, patinotaura nezvazvo encryption kana encryption ye data kana mameseji tiri kutaura nezve maitiro ekushandura ruzivo kuti ruchengetedzwe neimwe nzira. Chakajairika ndechekushandisa imwe mhando yehunhu kuchinjisa kana algorithm kuitira kuti ruzivo rwekunzwisisa ruchishandurwa kuita tambo isina revo yetsamba, nhamba uye zviratidzo. Nepo iko kubviswa kana kudonhedza maitiro iri nzira inochinja, mune iro ruzivo rusina maturo runoshandurwa kuita chimwe chinhu chinonzwisisika kumuchina kana munhu.
Iyi hunyanzvi hwekuita kuti zviome kune vechitatu mapato nekushandura ruzivo hachisi chinhu chitsva, Izvo zvakaitwa kwemireniyoni, kunyanya anopfuura makore mazana maviri nemazana mashanu apfuura. Kubva kuvaIjipita vaishandisa hieroglyphs kusvika kunguva dzeImperial Roma nekodhi yaKesari, yakadaidzwa nekuti Julius Caesar (2500 BC - 100 BC) akaishandisa kunyora mameseji aakatumira kumauto ake kuti kana aya mameseji awira mumaoko evavengi, havana kukwanisa kuzvinzwisisa uye havana kuwana mukana wehondo kubva kwavari.
Mune dzimwe nguva dzemazuvano isu zvakare tine muenzaniso we iyo nazi enigma muchina. Muchokwadi, anga ari aya mameseji akanyorwa akakwidziridzira komputa muUnited States neEngland, seyakatanga michina yemakomputa kuyedza kujekesa aya mameseji akaomarara.
Sezvaunoziva, kune akati wandei encryption mhando, senge symmetric uye asymmetric, uye iwe uchaona mashandiro anoita GnuGP kana GPG munzira mbiri idzi:
Symmetric encryption- Kana kiyi imwe chete ikashandiswa kunyorera uye kunyora mameseji, mafaera, nezvimwe. Mukati merudzi urwu rwekunyorera tinokwanisa kuwana nekushandisa akasiyana encryption algorithms senge AES, DES, 3DES, nezvimwe.
Asymmetric encryption: mune ino kiyi makiyi anoshandiswa, imwe yeruzhinji uye imwe yakavanzika. Veruzhinji vanoshandiswa kunyorera uye zvakavanzika kuti zvinyorwe. Mukati merudzi urwu rwekunyorera isu tinewo akasiyana encryption algorithms, senge RSA, ElGramal, nezvimwe.
Chinokosha zvazvinowana ndechekuti kuburikidza neiyi algorithm, ruzivo rwacho rwunoshandurwa uye hazvigoneke kuwana usina kutaura kiyi yekuzvinzwisisa ...
Vazhinji vanovhiringidza PGP neGPG uye haina kufanana. PGP inomirira Runako Rwekuvanzika uye iyo inotsanangura chirongwa chakagadzirwa naPhil Zimmermann kunyorera, kudonhedza uye kusaina dhata kuichengetedza. Yakaonekwa muna1991 uye yaive chirongwa chakakurumbira chakabatanidza nzira dzakaenzana uye dzakaenzana dzekuchengetedza ruzivo.
Asi PGP yaive yakanetsa software nekuda kwemalayisensi emamwe maalgorithms, anga asiri akavhurwa uye muPGP Inc. ivo vainyanya kunetseka nezvezvibvumirano zvakavaita kuti vatore rimwe divi. Zimmermann akanzwisisa kuti chiyero chepachena chePGP chakakosha nekuda kwekukosha kwakange kwaitwa nePGP panguva iyoyo, saka vakafunga chiyero chinonzi OpenPGP, chimwe chinhu chingave hutachiona hweGPG.
Chii chinonzi GPG?
GnuPG kana GPG (GNU Yakavanzika Yevarindi) isoftware inogadzirwa neFSF (Yemahara Software Foundation) yekumisikidza chirongwa cheOpenPGP inoenderana. Nayo unogona kunyorera nekunyora mameseji akajeka, mafaera, uye kugadzira masiginecha edhijitari kuchengetedza izvo zvatinoendesa neemail kana chero imwe network sevhisi. Zvakare, GPG yemahara uye yemahara pasi peGPL rezinesi.
Iwe unogona kushanda kubva pakoni kana terminal nekushandisa mirairo kana kune mamwe maGI anogona kuiswa kana zvirongwa zvinobatsira kushanda neGPG asi kubva kune yakati wandei zvine hushamwari uye inonzwisisika interface kune avo vasingade ganda zvakanyanya uye vanosarudza kuzviita kubva pakombiyuta nharaunda. Mamwe emapurogiramu aya anonzwika kunge akajairika kwauri, nekuti iwo anozivikanwa kwazvo paLinux distros, sezvazviri Seahorse.
Sezvo ini ndichiti haisiriyo yega imwe sarudzo yatinayo muedu distro kunyorera uye kudonhedza, sezvo paine zvimwe zvakawanda zvinobvira kupfuura GPG, senge OpenPGP pachayo. Muchokwadi isu takatopa mamwe mazita kune dzimwe nzira dzakadai se ecryptfs kunyorera madhairekitori uye zvikamu, cryptmount, dota, nezvimwe. Zvakare, kana iwe ukafunga kushandisa GPG kuburikidza chero eanowanikwa maGIs, iwe wakasununguka kuita kudaro, asi pano ndiri kuzotsanangura maitiro ekukurumidza kunyorera nekunyudza mafaera uchishandisa mirairo kubva kune iyo terminal.
Encrypt mafaera neGPG:
Kuti unyore mafaira neGPG kubva pakoni yeGNU / Linux distro, chinhu chekutanga chaunofanira kuita kuva nacho yakaiswa GPG mune yako distro, kune izvi iwe unogona kushandisa chero pakeji manejimendi manejimendi sezvo hudiki hweichi chishandiso chinoita kuti chiwanikwe mune ese marekodhi. Semuenzaniso, pane Debian uye zvigadzirwa zvaunogona kuyedza ne:
Paunenge waiswa unogona kutanga kuishandisa. Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe une chinyorwa faira chaunoda kunyora. Tiri kudaidza iyi faira private.txt mandiri kuzopinda mameseji LinuxAdictos.com uye kuinyora:
Saka zvino Tingave tatoita kuti inyorwe mushure mekupinda mupassphrase kuti ichatibvunza isu, ndiko kuti, kiyi yekunyorera (inotibvunza zvakare kuti tione uye tione kuti hatina kukanganisa patino taipa, nekuti ukaisa imwe kiyi ukasarangarira kana kukanganisika, ipapo ucha haikwanise kuibvisa). ziso! Ive nekuchenjerera nekuti iyo yakavharidzirwa faira haizodaidzwe yakavanzika.txt, asi pachinzvimbo .gg yekuwedzera inowedzerwa kuti uisiyanise kubva kune imwe, saka usazovhiringidzika pakutumira iyo yekutanga faira, sezvo ichizodzivirirwa ...
Nyora mafaira neGPG:
Iye zvino, unogona kudzima iyo yekutanga kana uchida uye ingosiya yakavanzika file.txt.gpg iyo inoita kunge yakavharidzirwa uye haugone kunzwisisa zvachose meseji yatakaisa mukati mayo, inoyeuka kuti izita reblog rino. Zvakanaka kana tichida dhonza meseji uye kudzoreredza yedu faira inoverengwa uye inonzwisisika, zvicharingana kwatiri kurangarira password yatinoisa pakutanga painotibvunza mushure mekuita unotevera kuraira:
Uye zvino mushure pinda pasiwedhi tichava nefaira zvakare sepakutanga kuinyora. Nenzira, sezvaungaona mumufananidzo wandakaita, zvinogona kuonekwa kuti chirongwa cheGPG chakashandisa iyo AES128 encryption algorithm nekukasira, sezvo tisina kudoma chero imwe nzira patinonyora faira. Asi kana iwe uchida kugadzirisa mhando yealgorithm iwe unogona kuburikidza nesarudzo -Cypher-chimwe chinhu inoteverwa nerudzi rwealgorithm iwe yaunoda kubva pakati peayo anotsigirwa neGPG (unogona kuona rumwe ruzivo mu man gpg). Uye kana iwe uchida kuziva anotsigirwa maalgorithms, unogona kuvaona na:
Uye iyo algorithm runyorwa pamwe neruzivo nezve iyo GPG vhezheni, nezvimwe.
Usakanganwa kuenda makomendi ako, kusahadzika uye mazano ... Ndinovimba iyi dzidziso ichave yekubatsira kukuru kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » GnuPG: Maitiro Ekunyora uye Kudzimisa Mafaira
Chinhu chimwe chete chakashata chandinoona ndechekuti neiyi system, iyo faira KWETE yakavharirwa inoramba iri "iripo" Mune yangu nyaya, ini ndoda iyo yekutanga faira kuti ibviswe zvakachengeteka uye / kana kushandurwa kune imwe encryption, pasina kusiya chero zvasara pane yevatengi komputa.
Iko kune kunyorera kunoenderana neCCRYPT ine graphical interface (qt5) kana ine terminal, inonzi Qccrypt ye debian / ubuntu.
Ndakaedza bvunzo uye nemurairo wekunyora handina kana dambudziko asi kana ndichishandisa rairo kuti ndisimbise zvinobva zvaratidza kuti haina kundibvunza password uye faira rekutanga rakaonekwa zvakare. Chii chaitika?
MuchiSpanish: "Kunonoka, asi kunyora nenzira kwayo, inofanira kutaridzika seizvi: gpg-o (zita rezita ratiri kuda kugashira mushure mekunyorwa) --d (encrypted filename.gpg)".
Iyo nyowani vhezheni yeKaOS 2018.08 ikozvino yakagadzirira pamwe nekuvandudzwa kutsva